Isikhathi sokuhola bab’Mengameli | Scrolla Izindaba
Isikhathi sokuhola bab’Mengameli
Abantu baseNingizimu Afrika bazobe benethemba lokuthi bazobona uMengameli uCyril Ramaphosa ohlukile kunomuntu obephethe kule minyaka emithathu edlule.
Ngenkathi ethula inkulumo yakhe ku-SONA ngoLwesine – phakathi kobhubhane kanye nenkinga yomthethosisekelo engahle ibe khona – umbuzo omkhulu kuzoba ukuthi ukhuluma nobani.
I-ANC noma izwe.
Ekuqaleni, uRamaphosa wathembisa ukuthi uzosebenza kanzima ukwakha kabusha isizwe, asindise umnotho, aqinise izikhungo zentando yeningi futhi alwe nenkohlakalo edla lubi.
Uke waba nezikhathi zakhe, kepha waphinde wabuyiselwa emuva ngamabutho anonya eqenjini, futhi wahlala ethule kakhulu ethandwa ngabantu abaningi.
● Ngemuva kweminyaka emithathu, iNkantolo yoMthethosisekelo ihlaselwa ngamalungu eqembu lakhe – lowo omandulelayo uJacob Zuma kanye noNobhala weqembu u-Ace Magashule.
● Ukungasebenzi kuye kwadlondlobala njengoba sekukhona abantu abangaphezu kwezigidi ezintathu ababeqashwe phambilini manje abangasebenzi ezinyangeni eziyi-12 kuphela. Ngokusobala wonke amazwe asephelelwe amandla ngenxa ye-Covid kulokhu, kepha ukungabi bikho kwemisebenzi edala inqubekelaphambili bekuvele kuyitshe lokugaya entanyeni kaRamaphosa ngaphambi kokuba kuhlasele ubhubhane.
Inselelo enkulu ukuthola isabelomali sokuxhasa uhlelo lokuqashwa komphakathi lukahulumeni oluthembise ukuqasha abantu abangaphezu kwabayizi-700,000 esikhathini esiyizinyanga eziyisithupha.
● Ukutholakala kanye nokusatshalaliswa kwemithi yokugoma i-Covid-19 kuzoba seqhulwini futhi ukufika komuthi wokugoma olindelekile osebenza kahle kakhulu ovela ku-Johnson and Johnson kungaqala ukuvba ubhubhane, okuyinto ewungqa phambili yokusinda kukaRamaphosa.
● Enkohlakalweni, i-cabal eyacwila izwe lacishe labhujiswa – futhi yacekela phansi amandla amakhulu ombuso – iyazilwela, yize kungabazeka ukuthi ngabe banesibindi noma bafuna ithemba.
Azikho izinhlanzi ezinkulu ezisejele okwamanje, kepha kube nokunyakaza ekushushisweni okukhulu ngakho abaphangi abekho ekhaya futhi bomile.
● Ukungcola okukhulu kuhulumeni kaRamaphosa kube ukuhlukunyezwa
kwemali ehlose ukukhokhela izinhlelo ezahlukahlukene ezilwa ne-Covid. Encwadini yakhe yamasonto onke ethi-“From the Desk of the President” ubonakale ehlisa isikali sehlazo lokuphanga i-PPE.
Uphenyo lwe-SIU lubheke ngaphezulu kwezinkontileka ze-PPE eziyizi-2,500. Ngenkathi olunye uphenyo lusaqhubeka, ezimweni eziningi izinsolo zitholakale zingenamsebenzi futhi izinkampani zasuswa ekwenzeni okungalungile. “
Isizwe sifuna omunye umbono kaRamaphosa owaxoxisana ngokuxazululwa kwentando yeningi ngaphambi konyaka wezi-1994, uRamaphosa owakhuluma nesizwe ekuqaleni kobhubhane ngonyaka owedlule ngenkathi kuqala umvalelo.
Ngemuva kokubamba ubuholi ngobuningi obukhulu engqungqutheleni yokukhetha ubuholi be-ANC ngowezi-2017 izitha zakhe zepolitiki bezilokhu zikhankasa ngokusobala kusukela lapho ukumxosha ngaphambi kwengqungquthela elandelayo.
Lokhu kusilimazile: URamaphosa uchithe isikhathi esiningi kakhulu ekhathazeka ngobunye be-ANC nesikhathi esincane kakhulu ngempilo yesizwe.
Ukuxokozela kwakamuva kukaZuma noMagashule ngodlame lwezepolitiki kuyisongo esifisweni sikaRamaphosa sokwakha kabusha izwe kanye nomnotho, kodwa yilokho abantu bezwe abazomxhasa ngakho.
Izinselelo zingephakame: iqiniso elibi ukuthi ikusasa lezigidi zabantu baseNingizimu Afrika lisalokhu lijoyinisiwe ku-ANC.
Umthombo wesithombe @liMokoena